paulina.joukov | တစ်ဦးကရထား Save
စာရေးသူ: Paulina Zhukov
နေအိမ် > Paulina Zhukov
ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းသောတောင်ထိပ်များ, blooming ချိုင့်, ရေတံခွန်များ, ရေကန်များ, နှင့်ကွဲပြားခြားနားတောရိုင်းတိရစ္ဆာန်, ကမ္ဘာ့မမေ့နိုင်သောသဘာဝသယံဇာတများတည်ရှိရာဥရောပ၏အိမ်ဖြစ်သည်. နွေ ဦး ရာသီတွင်ပွင့်လန်းသောကြီးမားသောစိမ်းလန်းသောမြေများကိုဖြတ်သန်းခြင်း,5of the most beautiful nature reserves in Europe are protected national parks that welcome travelers from…
အကယ်၍ သင်ကောင်းစွာအစီအစဉ်ဆွဲလျှင်ဥရောပရှိမိသားစုအားလပ်ရက်အားလပ်ရက်များသည်မိဘများနှင့်အသက်အရွယ်မရွေးကလေးများအတွက်အလွန်ပျော်စရာကောင်းနိုင်သည်. ဥရောပသည်ရဲတိုက်နှင့်တံတားများ၏မြေဖြစ်သည်, စိမ်းလန်းစိုပြေသောပန်းခြံများနှင့်မိန်းကလေးငယ်များနှင့်ယောက်ျားလေးများသည်မင်းသမီးလေးများအဖြစ်ဟန်ဆောင်နိုင်သည်…
ဥရောပ၏သဘာဝနှင့်ရှုခင်းများကနတ်သမီးပုံပြင်များကိုလှုံဆော်ပေးခဲ့သည်. ကျယ်ပြန့်သောတိုင်းပြည်များသည်အံ့သြဖွယ်ရာအံ့ဖွယ်ရာအချို့ကို ဦး တည်စေသောအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောတောင်တက်လမ်းကြောင်းများတည်ရှိသည်. ဟန်ဂေရီအတွက်ထူးခြားတဲ့ဂူ, ပြင်သစ်တွင်စိမ်းရေနှင့်အတူ Grand Canyon အ, သြစတြီးယားရှိရေခဲတောင်ပံများ, နှင့်…
အစိမ်းရောင်ပန်းခြံများ, တောင်ပေါ်မှာတောင်တက်လမ်းကြောင်း, နှင့်အဆင်ပြေရာသီဥတုအိမ်ပြင်ပျော်စရာရှိခြင်းများအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောဖြစ်ကြသည်. ဥရောပရဲ့နာမည်ကြီးမြို့ကြီးတွေမှာအရာအားလုံးရှိတယ်၊ ဒါကြောင့်ဥရောပကကမ်းလှမ်းထားတဲ့အပြင်ဘက်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုသင်ကြိုးစားနိုင်မှာဖြစ်တယ်. အမ်စတာဒမ်ရှိစက်ဘီးစီးခြင်းမှသည်မြူးနစ်တွင်လှည့်လည်ကြည့်ရှုခြင်းအထိ, ဤ7အကောင်းဆုံးမြို့ကြီးများ…
ကျယ်ပြန့်သောဥရောပနိုင်ငံများသည်ဒဏ္legာရီများနှင့်နတ်သမီးပုံပြင်များ၏မူလအစဖြစ်သည်, ရှေးဟောင်းလျှို့ဝှက်ချက်များကိုစောင့်ရှောက်သောရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရှုခင်းများနှင့်ကျေးရွာများ. အလယ်အလတ်နာမည်ကြီးမြို့ကြီးများနှင့်နီးစပ်သောသို့မဟုတ်ထုံးကျောက်တောင်များနောက်ကွယ်တွင်ပုန်းနေလိမ့်မည်, ဥရောပရှိပါ ၀ င်ပြီးစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောကျေးရွာများသည်အဆုံးမဲ့ဖြစ်သည်….
သင်သည်ဥရောပ၌စနေ၊ တနင်္ဂနွေသို့မဟုတ်ရှည်လျားသောအားလပ်ရက်အတွက်ခရီးထွက်သည်ဖြစ်စေ၊, သင်အမြဲတမ်းအနားယူရန်အချိန်ယူသင့်သည်. ပျော်ပွဲစားပွဲသည်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောနေရာများနှင့်အမြင်များကိုအနားယူရန်နှင့်လေးစားရန်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်. ဒါကြောင့်, သင်သည်သင်၏အပေါ်စတင်ရန်ကူညီရန်…
နေရာအသစ်များကိုခရီးသွားခြင်းနှင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းကအိပ်မက်ကိုအကောင်အထည်ဖော်စေသည်, ရဲ, နှင့်သင်ယူပါ. ထိုကဲ့သို့သောကျယ်ပြန့်ကမ်ဘာပျေါတှငျ, အရာအားလုံးကိုကြည့်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူး, ဥရောပရှိနေရာတိုင်းတွင်အတွေ့အကြုံနှင့်ပျော်မွေ့ရန်လည်းမဖြစ်နိုင်ပါ. ဤမျှလောက်များစွာသောစိတ်လှုပ်ရှားစရာနေရာများနှင့်အတူ, မင်းလုပ်နိုင်တယ်…
လူပျိုကြီးဘ ၀ ကိုထူထောင်ခြင်းသည်ပါတီ၏အကောင်းဆုံးသောသူ၊ ဂုဏ်အသရေရှိသည့်အိမ်ဖော်တစ် ဦး ဖြစ်သည်. ဥရောပ၌ဆိုးသွမ်းသောစွန့်စားမှုတစ်ခုအတွက်အတူတကွစုရုံးနေခြင်းထက် ပို၍ ပျော်ရွှင်စရာဘာရှိနိုင်သည်? အထူးသဖြင့်အုပ်စုထဲမှာကံကောင်းသူတွေကိုမတိုင်မီ…